Ciyaaraha TOP 15 ee loogu talagalay iPhone | Ciyaaraha ugu fiican !! | Wararka IPhone
Luis del Barco | | Ciyaaraha IPhone
Ma waxaad tahay mid ka mid ah kuwa jecel inay waqti fiican la qaataan ciyaaraha ku saabsan iPhone-kaaga? Hagaag, si aadan waqti badan ugu lumin inaad raadinta cinwaano wanaagsan uhesho taleefankaaga casriga ah, waxaan dooneynay inaan xul ku sameysano waxa aan isleenahay waa kulamada ugufiican iPhone Soo hel annaga Ciyaaraha TOP 15 ee iPhone!
In kastoo, haa, waxaan kaaga digeynaa in qaar ka mid ah kuwani ay noqon karaan kuwo balwad leh.
1 Maxay tahay sababta TOP 15 loogu ciyaaro iPhone?
2 Cashuur waalan
3 Alto Adventure
8 Saraawiisha Steppy
9 dhantaalay Brigade
10 Lego Star Wars: Awooda Awooda
11 Switch Color
14 Road Disney Crossy Road
Maxay tahay sababta TOP 15 loogu ciyaaro iPhone?
Da'da dhijitaalka ayaa wax badan na siisay markay tahay ciyaaraha fiidiyowga. Laga soo bilaabo mashiinnadii ugu horreeyay ee arcade illaa iyo hadda, saacado badan ayaa lagu maalgeliyey ciyaaro cinwaannada kala duwan - qaarkoodna durba waxay noqdeen sheeko-sheeko-madal kala duwan oo loo sameeyay. Imaatinka taleefannada casriga ah ee sii kordhaya ee ku jira jeebbadayada, horumariyayaashu waxay heleen qaab cusub oo ay ku soo bandhigaan hal-abuurkooda, iyo annaga, hab cusub oo aan ugu raaxeysan karno ciyaaro shaashadaheenna meel kasta oo aan aadno.
Bixinta cinwaannada aan ka heli karno xilligan App Store marka la eego cayaaraha waa mid aad u weyn, sidaa darteed, annaga Waxaan dooneynay inaan sameyno xulasho kuwa aan u maleyno inay ugu fiican yihiin inaan waqti fiican ku qaadanno iPhone-keena, si caajiska waqtiga firaaqada uusan boos ugu helin maalinteenna maanta.
Hadaad jeceshahay fiidiyowgaan oo aad rabto inaad la socoto wax walba oo aan ka sii deynay YouTube-ka markaa waa inaad iska qortaa. Maxaad sugeysaa ?. Kaliya waa inaad halkan guji.
Ciyaaraha caadiga ah ee ciyaarta arcade ee ku saabsan iPhone-keena. Banaanbax wanaagsan oo ah sawirada wax walba maahan, taas oo noo oggolaaneysa inaan saacado ku raaxeysano madadaalo saafi ah oo aan macaamiisheenna uga qaadno hal meel oo aan u qaadno meel kale.
Khibrad muuqaal ah oo ku jirta qaabkeedii ugu fiicnaa. Kaliya maahan ciyaar meesha aan xad u dejinay, laakiin sidoo kale ciyaaro waa khibrad aad u wanaagsan daqiiqado nasasho iyo xasillooni.
Isku day inaad ku hagto Ida safkeeda iyada oo loo marayo dhacdooyinka aad adigu ku jirtoWaxaad u baahan doontaa inaad ku cabiro maskaxdaada haddii aad rabto inaad ka baxdo indho-sarcaadka muuqda ee ay leedahay. Ka taxaddar, waxay umuuqataa mid fudud laakiin ma ahan.
Soo jiid bladlahaaga ugu fiican, waad u baahan doontaa haddii aad rabto inaad guuleysato. Combos, bambooyin iyo cadawga inaad garaacdo waa waxa kugu sugaya kulankaan halkaan kaliya kan ugu dhaqsaha badan uguna xirfad badan ayaa sii joogi kara. In la jaro miro ayaa la yiri.
Qandhada dixiriga ah! Ciyaarta ku guuleysaneysa qaabkeeda websaydhka ah ayaa kugula socon kara jeebkaaga, haddii aad rabto. U hago dixirigaaga iyo isaga si wanaagsan ugu quudiya si uu u baabi'iyo inta kale oo noqo kan ugu weyn dhammaan.
Iska ilow badbaadinta Dunida qatarta banaanka: naftaada badbaadi. Orod oo ka leexo caqabadaha iyo gantaalaha si aad ugu dhaqaaqdid sida ugu macquulsanKaliya markaa waad sii wadi kartaa inaad heer sare garatid oo aad kasbato khibrad.
Aad u xiiso badan oo xuduud la leh caqli-gal. Ku hag dabeecadaada marinka darbiga jaalle ah ka taxaddar inaad ku istaagto farqiga u dhexeeya mid iyo tan kale. Hadaad waxaad ku dhiman doontaa qaab nacasnimo ah waxaadna awoodi doontaa inaad geeridaada kula wadaagto GIF shabakadaha bulshada. Si fiican ayaa loo fikiray, dhimashadu ma xuma sidoo kale ...
Hubka! Xulo qaabka ciyaarta aad ugu jeceshahay iyoLa ciyaar kaligaa ama garabka garabka asxaabtaada si aad uga adkaato kooxda kaa soo horjeedda qaab aad u tiro badan oo khadka tooska ah ah. Mid uun baa noqon kara guuleystaha waxaadna noqon kartaa ciyaaryahanka go'aamiya habka cabbirku u dhici doono.
Lego Star Wars: Awooda Awooda
Ma dareemaysaa taas? Xooggu way soo kacayaan… Caawiyaan jilayaasha kala duwan ee filimka hal-abuurnimadiisa iyada oo loo marayo Galaxy iyo wuxuu maamulayaa inuu ka adkaado Amarka Koowaad. Sida cinwaannada Lego oo dhan, ma heli doontid waxyaabo cusub oo kugu soo kordha haddii aad horay u soo ciyaartay cinwaanno hore, laakiin waa mudan tahay inaad isku daydo.
Ha u oggolaan in garaaca wadnahaagu uu gariiro, maxaa yeelay halkan sax waa saaxiibkaa kuugu fiican. Hantida ugu weyn ee ciyaartani waa dhammaan qaababka ay na siiso, iyadoo siineysa dalab aad u ballaaran oo kaladuwan si aanan marna u joojin karin ku ciyaarida midabada.
BRRUUUM! Adrenalin ee tartanka baabuurta ayaa ku noolaan doona iPhone-kaaga ciyaartaan. Ka bilow xagga hoose iyo maaree inaad boos ka sameysato naftaada ka mid ah darawalada ugu fiican adduunka si loo dhammeeyo ku guuleysiga tartamada ugu fiican taariikhda. Cidna ma heli karto, laakiin haddii aadan ku dhaqaaqin xawaaraha waligaa ma ogaan doontid waxaad awood u leedahay.
Ciyaar fursad ah oo isku dareysa qeyb ka mid ah istiraatiijiyadda si loo hubiyo in guddiga uusan ka buuxsamayn dusha sare. Isku milmaan laba jibbaaranaha u dhexeeya oo sii wad inaad ku darto dhibcaha ilaa aad ka gaarto qalad kugu xukumi doona inaad ciyaarta dib u bilowdo. Noloshu waa sidaas.
Road Disney Crossy Road
Isku day inaad ka gudubto wadada iyo caqabadaha kala duwan leh jilayaasha Disney ee aad ugu jeceshahay dejinta si buuxda loo habeeyay qaybtan gaarka ah ee Wadada Crossy.
Is daji, ha ka walwalin. Tani waa lagama maarmaan haddii aan rabno isku dheji tirada ugu badan ee baloogyada adiga oo aan ka dhigayn wax ka yar iyo ka yar. Aad u fudud oo, sida caadiga ah kiisaskaas, sidoo kale aad u qabatimo.
Weligaa ma ku riyootay inaad duqa magaalo weyn noqoto? Ciyaartan waxaad ku maamuli kartaa degmadaada (inaad ka dhigto mid weyn ama aan weynayn waxay ku xirnaan doontaa maamulkaaga) iyo u samee meel ku habboon dadka deegaankaaga maahan oo keliya inay ku jeclaadaan halkaas, laakiin inay ku jeclaadaan oo ugu bishaaree afarta dabaylood. Kahor intaadan aqbalin jagada, xusuusnow: xoog weyn waxaa ku yimaada masuuliyad weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Ciyaaraha TOP 15 ee loogu talagalay iPhone
Oh hooyaday bixooo
Halkaan waxaa ka maqan dhadhankeyga Dagaalkii casriga ahaa 5! Waa layaab! Iyo inbadan haddii aad leedahay xakamaynta Gamevice!